तरकारी बजारमा बन्दा र काउलीको भाउ बरु एक साता स्थिर हुन सक्छ । सडक छेउमा थुपारिएको फोहोर केहि दिन नगन्हाउन सक्छ । तर, यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपाको बजार भाउ बढ्दो छ । नेकपा फुट्दै छ, ओली गुटको ७७ वटै जिल्लामा भेला हुँदैछ र प्रचण्ड–माधव मिलेर ओलीलाई पार्टीबाट हटाउँदै छन् ! यस्तै–यस्तै स्वार्थ केन्द्रित र व्यक्तिकेन्द्रित बजार हल्लाले नेकपाको भाउ काउली र बन्दा भन्दा सस्तो बनाईसक्यो भन्दा पनि हुन्छ ।
कुनै चिया अम्मलीले चिया पसलमा पिएको एक कप चियाको मूल्य तिर्नुअगाडि नै नेकपा नेताहरुको आजको मूल्यसुची उसको कानमा ठोकिन्छ । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाउ बढी छ । हिजो ओलीको भाउ बढी थियो ! किनभने ओलीले हिजो राष्ट्रपतिलाई भेट्दा बजारमा संसद भङ्गदेखि अध्यादेश र संकटकालसम्मको कुरा हुँदै थियो ।
ओलीले आफ्नो गुटका विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई मात्रै भेट गर्दा प्रचण्डले चिनियाँ राजदूतसँग एक घण्टा छलफल गरे । यही कारण आज चिया पसल र भट्टीहरुमा प्रचण्डबारे गफ चल्दैछ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि आफ्नो भाउ घट्न दिएका छैनन् । बालुवाटार र खुमलटारमा दैनिक उनको मूल्यसहितको सूचि विचौलियाले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए रोजेको मन्त्रालय पाउने हल्ला बालुवाटारमा सुनिँदै गर्दा खुमलटारले चाहिँ ओलीसँग नाता तोडे भविष्यमा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री सप्पै दिउँला झैं गर्छन् ।
बजार भाउ माधव नेपालको पनि बढेकै छ तर, उधारोमा । नगदमा कारोबार गर्न विचौलिया तयार छैनन् तर उधारोमा हो भने मागेजति भाउ दिन बालुवाटार र खुमलटार दुवै तयार छन् । नेकपा सचिवालयमा रहेका रामबहादुर थापा बादलको पनि भाउ बढ्ने घट्ने भैरहन्छ । विचौलियाले आफ्नो स्वार्थअनुसार नेताहरुको भाउ लगाइरहँदा तिनको गुणस्तर र टिकाउपनबारे ध्यान दिएको पाइँदैन ।
कहिलेकाहीँ ४८ घण्टा पनि नटिक्ने बोली र व्यवहार भएका कारण बजारमा कमसल सामानको जस्तै कमसल नेताको मूल्य घटेको देखिन्छ । सायद आइएसओ प्राप्त भनेर कमसल सामान बजारमा भेटिएजस्तै असली मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी भनिएकाहरु हेर्दा मार्क्सवादी देखिएपनि व्यवहारमा विचौलिया भन्दा फरक नदेखिएर होला उनिहरुलाई ‘नक्कली कम्युनिष्ट’को ट्याग लगाईएको छ ।
२००७ सालदखि २०७० सालसम्म भएका राणाविरोधी, पञ्‍चायत विरोधी आन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलन र २०५२ मा सुरु भएको जनयुद्ध अनि ०६२-०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका नेता जब स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र जनविरोधी चरित्र लिएर सत्ता बार्गेनिङको लागि जोसँग पनि भेट्न थाल्छन् अनि चियापसल, भट्टी र हाटबजारमा तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्दै यिनीमाथि मजाक हुन थाल्छ । यिनको मूल्य कवाडी सामानसँग तुलना गरिन्छ र यिनको विचार र दर्शन कागजको खोस्टा बन्‍न पुग्दछ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद वा नौलो जनवाद भन्‍ने तर्क र बहसबाट सुरु हुने गफको अन्त्य गुटको राजनीतिमा पुगेर मन्त्री, राजदूत वा संवैधानिक नियुक्तिमा भाग पाइएन भन्दै विर्सजन हुन्छ । हुन त नेकपा अध्यक्ष ओलीको हावादारी गफ सुन्‍न बानी परिसकेका जनतालाई चिया पसल र भट्टीमा हुने यस्ता गफ पनि सुन्‍न कुनै असहज हुने कुरा भएन । जब नेताले नै सैद्धान्तिक भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर पार्टीभित्र लफडा गर्दै अंश दाबी गरिरहन्छ पार्टीको अवस्था भेंडी बजार र नेताको हैसियत विचौलिया भन्दा बढीको हुनै सक्दैन । पूर्व एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा पार्टी, सिद्धान्त, विचारलाई नहेरी नेता र उसको पद व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिँदा आज कम्युनिष्ट चरित्र र मार्क्सवादी विचारबाट स्खलित बन्दै गएको छ ।
विचार र सिद्धान्तका आधारमा गरिएको पार्टी एकता भए पो नेता कार्यकर्ताले गर्वका साथ ‘मेरो पार्टी,मेरो नेता’ भनेर काँधमा बोकेर हिँड्न सक्थे । यहाँ त नेता नै स्वार्थ पूरा हुँदा र चित्त बुझ्दासम्म म एक नम्बर तँ दुई नम्बर भन्ने अनि भागबण्डा र स्वार्थ पूरा नभएपछि ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भनेर पाखुरा सुर्कने प्रवृत्ति हावी छ । जसको परिणाम चितवनमा सुरेन्द्र पाण्डे अनि बुटवलमा बिष्णु पौडेल कार्यकर्ताबाटै लखेटिई रहन्छन् र केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र सूर्य थापाको जुहारी चलिरहन्छ ।
स्वार्थ केन्द्रित हिसाबकिताब र पद प्रतिष्ठाका विषयमा कुरा मिल्दासम्म नेतृत्वको रक्षा गर्ने तर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुने भएपछि सिधै विदेशी दलाल करार गर्ने प्रवृत्ति बोकेर पार्टी अध्यक्षको ढोके र बैठके बन्ने नेता कार्यकर्ताको कारण पनि पार्टी जनताबाट टाढा हुने अवस्थामा पुगेको छ । संघीयता र गणतन्त्रलाई मनैदेखि नरुचाउने प्रवृत्ति बोकेका केपी ओली र पदका निम्ति जोसँग पनि मिल्ने र बार्गेनिङ मात्रै गरिरहने प्रचण्ड प्रवृत्तिले नेकपालाई मात्रै होइन देश र जनताको सपनालाई समेत चकनाचुर बनाइदिएको छ ।
सडकमा सर्प नचाउने र सप्पै रोग निको हुने तेल भन्दै बेच्‍ने चटकेलाई समेत माथ गर्ने रेल, तेल र पानीजहाजको चुट्किला भन्‍ने ओली अनि सधैं जनयुद्धको धङधङ्गी लिएर सत्ताकै निम्ति सहिदका सपना बेच्ने प्रचण्डको मिलनले जनतालाई धोका र दलाल, तस्कर, विचौलियालाई संरक्षणबाहेक केही भएन । त्यसैले अझै बजारभाउ घट्नु अगाडि नै कम्युनिष्ट भेषमा जनता झुक्याउने नाटक बन्द गरेर आ-आफ्नो लङ्गौटी समाते बेस हुने थियो कि कमरेड ।
जनताले ३०औं वर्ष संघर्ष गर्दा पनि परिवार पाल्न गाह्रो हुने तर नेताले एकपटक सत्तामा पुगेपछि ७ पुस्ताले पनि खाएर नभ्याउने सम्पति जोड्ने कम्युनिष्ट शासन जनतालाई महङ्गो भैसक्यो । हिजो हात्ती छाप चप्पल लगाउन कार्यकर्ताको सहयोग खोज्ने नेता आज त्यै कार्यकर्ता चिन्न नसक्ने कसरी भयो ? झापा, डडेलधुरा र चितवनमा जन्मेका कोही उपचार नपाएर मर्नुपर्ने कोही सिङ्गापुर र युरोप पुगेर उपचार गर्ने हैसियत कसरी प्राप्त भयो ? कम्युनिष्ट शासनमा यस्तो विभेद र असमान ब्यबहार कहिले कुन वादले सिकायो ? यी सबै कुराको जवाफ अब विचौलिया र नक्कली नेताबाट खोज्न सम्भव छैन ।
त्यसैले जनता जाग्‍ने बेला भयो । अब काँग्रेस, कम्युनिष्ट वा राजावादी बनेर होइन हिमाल, पहाड, तराई, जाति जनजाति सबै देशभक्त बनेर समाजवादी आन्दोलनको उठान गर्न ढिला नगरौं ।
होइन भने ओलीको उखानलाई पछ्याउँदै भन्नुपर्छ, सबै कुरा गफै त हो सम्धि । गफैगफमा नेकपा भाले मेवामा रुपान्तरण हुँदैछ । भाले मेवा अर्थात् न घाँस न फल, न दाउरा न मल । रुख विशाल छ तर फल्दैन । हाँगापातको पनि केही काम छैन । नेता कार्यकर्ता सबै बतासे कुरा गर्छन् । स्वाभिमान बेचेका र विवेक बन्धक राखेका जस्ता । गलतलाई गलत भन्न सक्दैनन् । तबेला बाँधेका घोडाहरु जस्तो मालिकको पछि लागेका छन्, गनगन गरेका छन्, एउटै पार्टीको सदस्यता लिएकालाई खुइल्याएका छन् । लोकलाज पनि बाँकी नरहने गरेर नाङ्गिएका छन् । नङ्ग्याएका छन् । आफू नाङ्गै छन्, अरुलाई सेम सेम भनिरहेका छन् ।
भाले मेवाले त अक्सिजन दिइरहेको छ पर्यावरणमा, तर यस्तो अवस्था नआओस् कि सहिदको खेती गरेर हुर्किएको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु धर्तीका लागि बोझ हुनुपरोस् । दुनियाँले दुत्कार्ने हुनुपरोस् । धेरै ढिला भइसक्यो तर, गल्ती सच्याउन कहिल्यै ढिला हुँदैन । आगे कमरेडहरुकै मर्जी । स्वर्गबाट मार्क्सले सद्बुद्धि दिऊन् ।